﻿ पुष्पलालले जन्माएको कम्युनिष्ट र अहिलेको छिन्नभिन्न कम्युनिष्ट
- सेमन्त उपाध्याय
मृत्युदण्ड दिइनु एक दिनअघि दाजुले भनेको यो कुराले १६ वर्षका पुष्पलालको जीवनको कोर्स परिवर्तन गर्यो । दाजुको त्यो भनाईले उनलाई राजनिति प्रवेश गर्ने प्रेरणा दियो । भेटको भोलिपल्ट पुष्पलालका दाजुलाई गोली ठोकी मृत्युदण्ड दिइयो ।
पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्म वि.सं. १९८१ असार १५ गते रामेछाप जिल्लामा पिता भक्तलाल र माता तुलसीकुमारीको माइला छोराको रुपमा भएको थियो । पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमीका बिच पुष्पलाल पनि क्रान्तिको माहोलमा घुलमिल मात्र भएनन्, नेतृत्व नै लिन थाले ।
वि.सं १९९८ मा पुष्पलाल श्रेष्ठले प्रेमबहादुर कंसाकार, शम्भुराम श्रेष्ठ र सुर्यवहादुर भारद्धाज र राजासँग मिलेर नेपाली प्रजातान्त्रिक संघको गठन गरे । सम्पुर्ण सदस्यले आफ्नो रगतको प्रतिक्षापत्रमा सहि गरेर मात्र पार्टिको सदस्य हुने नियम थियो ।
२००४ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलनको नेतृत्व कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठले गरेका थिए । जनताले गरेको नेपालको पहिलो जनआन्दोलनका रुपमा २००४ सालमा गरिएको आन्दोलनका रुपमा विश्लेषण गरिन्छ ।
नेपालमा जहाँनिया राणाशासन कायम रहेका बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि भारतको कलकत्ता श्याम बजारमा भुमिगत रुपमा स्थापना गरिएको थियो । संस्थापक महासचिव क. पुष्पलाल थिए । उनीसहित ६ जना क.पुष्पलाल, क.नरवहादुर कर्मचार्य, नारायणविलाश जोशी, मोतिदेवी, निरन्जन गोविन्द वैद्य संस्थापक थिए ।
पुष्पलालले २००५ सालमा कम्युनिष्ट घोषणापत्र पहिलोचोटी नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका थिए ।
त्यसलगतै पुष्पलालले कम्युनिष्ट विचारधाराअनुरुप लेखेको पहिलो लेख नेपाली भाषामा लेखिएको कम्युनिष्ट घोषणापत्र झै बन्यो । उनको कम्युनिष्ट पार्टिमा गरेको योगदान अतुलनिय छ । वास्तवमा जनवादको नारा, मौलिकवादी चिन्तक गणतन्त्रको नारा, क्रान्तिको दिशानिर्देश गर्ने, द्वन्दवादी दृष्टिकोणको विचार विष्लेषण गर्ने सबै कुराको श्रेय क. पुष्पलाललाई जान्छ ।
२००६ साउन ७ का दिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको स्थापनापछि कमरेड पुष्पलालले २ वर्षसम्म महासचिव चलाए । त्यसअवधिमा नेपाली समाजलाइ हेर्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोणको विकास गरे पुष्पलालले । त्यसभन्दा पहिला धार्मिक र ईश्वरवादी मान्यता हावी थियो । ईश्वरले यो पृथ्वी सिर्जना गरेका हुन्, जे कुरा हुन्छ ईश्वरको देन हो भन्ने धार्मिक अतिवादी सोँच थियो ।
त्यो सोँचभन्दा फरक भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्न बाध्य पार्ने श्रेय पनि पुष्पलाललाई नै जान्छ । पुष्पलाल अतिवादी हुनुहुँदैन भन्ने विचारधारा राख्दथे । कम्युनिष्ट पार्टि र संगठन, नेता, सिद्धान्त र संघर्षले बनेको प्रगतिशिल पार्टी हो र यसको मेरुदण्ड पनि यिनै चिज हुन् भन्ने क. पुष्पलाल २००८ सालको पहिलो सम्मेलनबाट महासचिवबाट हट्न पुगे । क. मनमोहन अधिकारी महासचिव बने । पार्टीभित्र पुष्पलाल अल्पमतमा पररेपनि पार्टीले उनको विचार अलवम्बन गर्यो । उनैले बनाएको कम्युनिष्ट पार्टी उनैको विचार, संगठन, सिद्धान्तबाट संघर्षशील रह्यो ।
२०१० सालको पहिलो महाधिवेशनबाट पनि क. पुष्पलाल अल्पमतमा परे । तेस्रो महासचिव तुलसीलाल अमात्य बने ।
यसविच कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्धसमेत लगायो । २०१५ सालको नेपालको इतिहासकै पहिलो आम निर्वाचनमा नेकपाले ४ सिट जितेको थियो । २०१५ देखि २०१७ सम्म विपि कोइराला नेपालकै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०१७ पछि तत्कालिन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरेर पञ्चायति व्यवस्था लागु गरेपछि फेरी नेकपालाई पञ्चे र राजाले प्रतिबन्ध लगाए ।
त्यस क्रममा केशरजंग रायमाझि समुहले पञ्चायति व्यवस्थाको समर्थन गरेपछि नेकपा फुट्यो । विभाजनपछि झापामा वर्ग शत्रृ सफाया अभियान चलाउँदै झापा क्रान्तिमार्फत् नेकपा माले र हालको एमालेको रुप लिएको हो ।
मनमोहन र पुष्पलालको धार २०४७ सालमा एक भयो । एमाले बन्यो । मोहनबिक्रम सिंह, निर्मल लामाहरुको नेतृत्वमा विभिन्न समुहहरु नेकपा चौथो, मोटो मसाल, नेकपा पातलो मसाल, नेकपा एकताकेन्द्र हुँदै हालको माओवादी धार बन्यो । मोहनविक्रम सिंह भने अहिले पातलो मसाल बोकेर बसिरहेका छन् ।
२०१५ सालमा ४ सिट जितेको नेकपा पञ्चायत कालमा विभिन्न आरोह अवरोहमा विभाजन भएर पनि तत्कालिन माले र माक्र्सवादी मिलेर बनेको एमालेले २०४६ सालपछिको जन आन्दोलनपछि ६९ सिट जित्यो । माओवादी ९ सिटसहित तेस्रो दल भएको थियो ।
२०५१ सालको आम निर्वाचन बहिस्कार गरी माओवादीले संसदिय व्यवस्थाको विरोध गर्दै २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि महान जनयुद्धको संखघोष गर्यो । त्यस्तै एमाले २०५१ सालको आम निर्वाचनमा ८८ सिटसहित पहिलो पार्टि बन्यो र दक्षिण एसियामा नै पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टिको एकल सरकार गठन गरी निकै लोकप्रिय सरकार चलायो । तर त्यो सरकार जम्मा ९ महिनामात्र टिक्यो । फेरी २०५४ सालमा विभाजित भयो । २०५६ को आम निर्वाचनमा ७० सिटसहित एमाले दोस्रो पार्टि बन्यो ।
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पछि संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ बहुमतसहित सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो बन्यो । यस बिचमा कम्युनिष्ट पार्टिबाट क. मनमोहन, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, के पि शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका दुइ कम्युनिष्ट पार्टिले करिब दुइ तिहाइ बहुमत सिट जित्न सफल भएका थिए । यो कम्युनिष्ट पार्टिको एकता नै नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टिको सबैभन्दा ठुलो सफलता थियो ।
५ वर्षको लागि बनाइएको दुइ तिहाइ नजिकको कम्युनिष्ट सरकार आजसम्म आइपुग्दा तीन वर्ष जसोतसो सरकारको नेतृत्व गरेका के पि ओलीले बारम्बार संसद विघटन गरेपछि अदालतबाट सत्ताच्यूत भएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टि विभिन्न गुट समुह मिलेर छिया छिया भएको छ ।
जे होस्, कम्युनिष्ट पार्टी अझै एक हुनसक्छ । अझै शक्तिशाली हुनसक्छ । जसको आधार भनेकै क. पुष्पलालको विचार हो । उनका विचारका कारणले कम्युनिष्ट पार्टि अहिलेसम्म जिवित छ । सामान्य नेता आन्दोलनले जन्माउँछ र विशिष्ट नेता आन्दोलन र विद्रोहले जन्माउँछ भन्ने प्रमाण क.पुष्पलाल हुन् । नेपालमा नेकपा र कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रणेता, श्रेयता र इतिहास पुरुष क.पुष्पलाल हुन् । उनलाइ नसम्झी कम्युनिष्ट पार्टि सम्झनु अपुरो र साँघुरो रहनेछ ।